Embracer anotenga Square Enix masitudiyo kuseri kweTomb Raider, Deus Ex uye Mbavha - Spielpunkt - bhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Embracer anotenga Square Enix masitudiyo kuseri kweTomb Raider, Deus Ex uye Mbavha
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 2, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Boka reSweden Embracer Group radzoka padanho rekutenga. Panguva ino boka rinoda kusunungura madhora mazana matatu emadhora ekuAmerica kune ruoko rwakatambanudzwa rwemusika weSquare Enix wekumadokero mitambo. Kunyanya, uku ndiko kutorwa kwemasitudiyo kuseri kweTomb Raider, Mbavha naDeus Ex, kusanganisira mhando.
Swedish Embracer Group iri kusimbisa chinzvimbo chayo mumusika wemitambo Kambani yevabereki iri seri kwemakambani akaita seKoch Media neTHQ Nordic iri kufambisa kukura kwayo kuburikidza nekutora kweEidos Montreal, Square Enix Montreal neCrystal Dynamics. Iwo anozivikanwa masitudiyo anotsigirwa nemhando dzakasimba, kusanganisira iyo Tomb Raider, Mbavha uye Deus Ex vhidhiyo yemutambo wakateedzana.
Mamirioni mazana matatu anobata neSquare Enix
Chibvumirano ichi, chakakosha madhora mazana matatu emamiriyoni emadhora, chinosanganisira mapazi masere pasi rese uye huwandu hwevashandi vanosvika chiuru nemazana. Izvi zvinonzwika sezvizhinji, asi kana ukatarisisa zviri nani. Mhando dzese dzakatengwa ndedzemhando yepamusoro, dzinozivikanwa muchiitiko uye dzinowanzo tengeswa zvakanyanya mumhando dzadzo. Sekureva kwaEmbracer, chibvumirano chinofanirwa kugadziriswa kuburikidza nekutengesa mari, i.e. kubhadharwa zvizere pakupera. Boka reSweden rinotarisira kuti kutora kwekutora kupedzwe muchikamu chechipiri chegore rezvemari, i.e. mukati menguva pakati paChikunguru naGunyana wegore rino.
Sei zvese izvi? Mune chirevo chayo, Square Enix yakati chibvumirano ichi chinobvumira "kusikwa kwemakambani matsva anozofambisa mari munzvimbo dzakaita se blockchain, AI uye gore." Square Enix haisi kusiya musika wayo wepakati weJapan, uye masitudiyo ekambani, ayo ari kushanda kunze kwenyika, acharamba achiburitsa mitambo yemhando dzakadai seJust Cause, Outriders uye Life is Strange.
Phil Rogers, CEO weSquare Enix America neEurope, akati, "Embracer ndiyo yakavanzika yakavanzika mumitambo." Iko kuunganidzwa kwakamisikidzwa, kwakasarudzika kwevemabhizinesi. Uye: Isu tinofara kuve chikamu chayo. Sezviri pachena, Embracer CEO Lars Wingefors anoona zvinhu zvakafanana. Iyo tarenda yekugadzira uye rekodhi rekodhi kuseri kwemhando inogonawo kuoneka mumastudio ayo ave kutorwa.
Zvakanga zvatove pachena kuti chimwe chinhu chaizochinja kuSquare Enix, kunyanya muchikamu chemusika wekumadokero. CEO Yosuke Matsuda akataura kuti masitudiyo eJapan haafanire kuyedza kugadzira mazita emitambo akanangana nevatambi vekumadokero.
Embracer inogara yakatarisana nekukura kuburikidza nekutora. Mubvunzurudzo neFinancial Times, Lars Wingefors akataura kuti vari kutarisira kutora zvakati wandei mumakore anotevera. Nekudaro, kwave kune zvakare akawanda eaya munguva yakapfuura: kubvira 2020, boka riri muKarlstad (Sweden) rakatora makumi matanhatu nembiri. Vhoriyamu: inenge mabhiriyoni masere emadhora ekuAmerica. 62 masitudiyo ekuvandudza ndeeboka, pamwe nemapoka gumi makuru anoshanda, anosanganisira THQ Nordic kana Gearbox Software kana Saber Interactive.
The Embracer Grkwete chete chikamu chemitambo chinoonekwa, nguva pfupi yadarika zvirongwa zvekutorwa kweRima Horse Comics zvakaratidza kuti uye Asmonee.
Deus Ex: Rudzi Rwakakamurwa D1 * 28,51 EUR tenga
Kare NuraTrue muyedzo: yechokwadi isina waya buds ine ruzha rwakapfuma rwemitambo mbozha
Inotevera Kasino mini-mitambo inowanikwa mumitambo iyi yemavhidhiyo
Classic board game CATAN inowanikwa yeNintendo Switch
"Kudzokera kuMidzi": Yangu yekutanga LAN bato mumakore mazhinji
Iyo Scare Factory: Kickstarter board game ine chinangwa chekutyisidzira vatambi